iOS 11 ichadzima yega mashandisiro atinoshandisa zvishoma, asi ichachengeta yako data | IPhone nhau
MuActualidad iPhone, zvese mumwe wangu José uye sevha, tinokuzivisa iwe vhiki nevhiki nezvese zvinopihwa zvekushandisa kana mitambo inowanikwa kuti utore mahara kana zviripo nechidimbu chakakosha. Kana iwe uri mumwe wevashandisi vanotora ese maapplication atinokuratidza, zvingangoita kuti nekufamba kwenguva, chishandiso chako chichava chizere nemhando idzi dzekushandisa, mashandisiro atinongotora kuti tivaedze asi isu hatina kuashandisazve . Apple inoziva izvi uye nekusvika kweIOS 11 ichaenderera ichiongorora chishandiso chedu uye ichave ichitarisira kudzima idzi mhando dzekushandisa.
iOS 11 ichadzima nguva nenguva maapplication atakaisa pane yedu kifaa asi asina kushandiswa kwenguva yakareba. Ehezve, kudzivirira vashandisi kubva pakuisa maoko avo kumusoro kwavo pamberi pekukanganisa kurasikirwa kweruzivo rwakachengetwa mariri, inotevera vhezheni ye iOS ichataura rese data rakachengetwa mariri. Uye zvakare, ichatibvumidzawo kuti tikurumidze kudzoreredza kunyorera kubva kumagadzirirwo ayo, kubva kwatinogona kuratidza kana tichida kudzima rese data rakanga rakachengetwa mariri.
Kuti uwane data rezvikumbiro izvo zvakadzimwa nekusaishandisa kwenguva yakareba, zvisina kusimbiswa neApple, isu tinofanirwa kuenda kuIOS Zvirongwa uye tinya paKuchengetedza, uko kwatichawana sarudzo yekuzara bvisa iyo data kana dzosa chishandiso chaicho pasina kuenda kuApp Store.
Iri basa nyowani rakanakira kuchengetedza mudziyo wedu nenzvimbo hombe iripo, nekuti ichatitadzisa kutora nzvimbo mukati mayo nemaapplication atisingashandise. Ingadai yakatove yakatangisa iyi sarudzo apo iyo Cupertino-based kambani yakavhura iyo 16 GB mamodheru.Zvirokwazvo vazhinji vangadai vakazvikoshesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 ichadzima yega mashandisiro atinoshandisa zvishoma, asi inochengeta data rako
Ndine zvakawanda zvemaapplication akatakurwa pane ese ari maviri iPad uye iPhone.
Kazhinji handizvishandise asi pandinenge ndichizvida ndinoda kukwanisa kuzvishandisa pasina dambudziko. Kana ndikafunga kuti havashande, ndinongozvidzima.
Ndinovimba chimiro ichi chiri chesarudzo.
Pindura kuna dd
Izvo zvinoitika kwandiri, ndinotarisira kuti chinhu chinosarudzika.